Mayelana irina allegrova ukusho kusukela isigaba labo besifazane ukushintsha kubayeni babo njengokungathi amagilavu. Yena ngempela washada izikhathi ezingaphezu kwesisodwa, kodwa wayehluleka ukwakha nokuphila komkhaya okujabulisayo. Mhlawumbe ngenxa yezimfanelo eliyigugu kunawo wonke abesifazane yena kubhekwa bitchiness. Ngisho kusukela izingoma zakhe Ungadlali mazwi: "Sonke, abesifazane - Bitches ...". Njengoba ukuhlukana, irina allegrova futhi Igor Kapusta, Sekuphele iminyaka engaphezu kuka-15, kodwa lapho ecula, umculi abasuke bengakakwazi ukusebenzisa ukumthethelela, ezijulile unjalo isilonda. Lokhu mshado yesine zilandelana uma ungumuntu wakhe.
Igor Kapusta: Biography, empilweni yakho
Hhayi nje mculi wayeneminyaka akwazi ukubeka amazwana isehlukaniso yakho. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye isikhathi esincane isidlulile, uthando nenzondo kancane kudamba, iNdlovukazi pop yesehlakalo kancane wavula kwesihenqo Boudoir yakhe.
Lapho behlangana, isimo Irene kwaba 44, futhi Igor - 35. Abaningi babangane babo nezihlobo bavuma ekuqaleni wabikezela ukuthi umshado wabo esasizobhujiswa, njengoba Iklabishi Igor khona umdansi abavamile, futhi u-Irina - a soloist ethandwa, ngubani eqoqwe badayise e enjalo zemicimbi enkulu njengoba "-Olympic." Kodwa uthando okubi. Allegrova eceleni kwakhe bayakhohlwa konke, she cabanga was ekugcineni ekuphileni kwakhe waba yangempela inganekwane.
Futhi Akumangalisi ukuthi lo muntu wesifazane eqinile ngomzuzu sakhe esikhethiwe Akungabazeki kwakungeke ngenye washada naye ngo-1993. Irina waphuthuma umcimbi njengoba egula kakhulu, njengoba uyise, futhi wayefuna ukuba basheshe ukubona owesifazane wakhe ujabule oshadile. ngokushesha iklabishi ngilitholile ulimi ezivamile naye. Ngemva kwamasonto amabili the wedding, uyise washona. Ngenxa yakho konke lokhu ngokushesha izenzakalo esindayo, irina allegrova futhi Igor Kapusta kuya Registrar futhi asizange ufinyelelwe. Bashada ngaphansi passport zamanga, asebethathe abangane.
Igor Kapusta, ogama Umlando womuntu ophilako kancane aziwayo, ambozwe ukukhathalela okuqotho futhi ithande umkayo, wazama ukumsiza kukho konke, ikakhulukazi kusukela wakhathazeka kakhulu ngenxa yokugula noyise emthandayo. Igor zonke ngesikhathi kuzanywa usondele, waxosha Irina nendodakazi yakhe Lala esibhedlela, bese wayeka umsebenzi wakhe futhi wazinikela ngokuphelele ekwakheni indlu ezweni e Vatutinki. Empeleni wayefuna ukwakha umkhaya isidleke efudumele bobabili, futhi mhlawumbe ngisho ezintathu. Irina wafuna abelethe, kodwa akazange aphumelele.
Nokho, ukuze isimo nomkakhe, ballet dancer ukujwayela wehluleka, ngoba wayazi kahle ukuthi wayengubani nokuthi ungubani. Irina akazange aphike amahemuhemu ukuthi wayengumuntu wakhe umxhasi, nakuba kwakungathandeki kweqiniso. Cha, ukwenza kusuka yabo umqondisi umxhasi noma umyeni Irina wayecabanga ukuthi ngeke. Bonisa ibhizinisi akuyona wonke amazinyo, kodwa uzama ulithumele ngokuthuthukisa okwabo, kodwa lapha idinga talent, futhi Igor kule futhi abazange bazame.
Ngemva kweminyaka eyisishiyagalombili umshado, umshado inkanyezi kancane kancane waqala crack ezinkulu. Futhi lokhu nendima enkulu hhayi kuphela ukukhashelwa njalo Igor - babé uvivinyo lwangempela enkazimulweni kanye nemali ke, yini owaphihliza kuye. Phela, kwakungeke kunjalo, wafika kanjani zonke nikulungele waphakamisa ngokushesha, umbukiso waqala, ukuba ahileleke utshwala ukushintsha umshini ngamunye ngamunye, bese kukhona senkosikazi.
Indlu waqala ukuxabana Irina ngisho kubhekwe ekuqaleni ukuyeka esiteji futhi ahlale ekhaya ngethemba lokuthi emkhayeni, ekugcineni, yokuthuthukisa ubuhlobo bethu, kodwa kudingeka imali, futhi baletha recitals wakhe.
Ngolunye usuku, ukubukela ukuphila rushivsheysya likamama Igor, Lala wabhala incwadi. Irina kwakubonakala inonya futhi babe nesihluku, Nokho, kwadingeka ukuxabana omkhulu, emavikini amabili. Kodwa ngokushesha allegrova aqaphele ukuthi indodakazi yakhe kahle, nakuba isikhathi eside wayengafuni lokumba izinkinga ngokucindezela umndeni.
Wabona ukukhanya ngendlela, yena sashintsha isigubhukane Uyibheka maqondana umyeni wakhe futhi wanquma ngithi goodbye kuya iklabishi. Umama nendodakazi avela kuye lo oculayo bathokoza ka sokuvalelisa yabo, ngoba eminyakeni yamuva, ngaphandle Irene baqala ukuhlupheka futhi zonke izindawo zako ezizungezile. Waqala ukubheka induduzo ingilazi utshwala. Kodwa-ke namanje ngakwazi ukuthola amandla ukuqala impilo entsha.
Iklabishi kwesokunxele Irene ngo-September, ngaphambi walicacisa, wathatha ambalwa sweaters futhi isixubho, engena emotweni yakhe futhi wawaxosha. Kuthe ekuqaleni nje ukuba siphile, waxwayisa Irene ukuthi uma bengenayo ukuthuthukisa lutho, kwangithinta ihambisane isixubho, ngakho naye bese ushiye. Ngendlela efanayo, wayebonakala unenkinga okwabikezelwa ngokwakho. Ayikwazi athwale ngokuhlukana, allegrova kuqala ngokuthi, ngifuna ukukhuluma kuye, kodwa nokuziqhenya kwakhe eyayilimele owesilisa engafuni lokhu, kodwa ngemva kwesikhathi wayeseboshwe baqala ukufuna naye emhlanganweni, kodwa lokhu futhi akazange asebenze.
Ngo-2001, Cole washintsha ngokuphelele umbuthano wakhe abangane, waqala ukuba nebhizinisi, yena nabo bashada futhi saba nendodakazi wazalwa Sasha. Wabe esezala umkhulu: indodana yakhe ukuba ibuye emshadweni wayo wokuqala, Stanislav, ohlala eMoscow, indodakazi.
Ake ubuyele emuva esikhathini esidlule. Igor Kapusta: Biography, usuku lokuzalwa
Mayelana Cole idatha encane kakhulu oluchaza. Esikwaziyo ukuthi ephothula Petersburg Vaganova ballet esikoleni. Ngezinye 18 Igor Kapusta (usuku lokuzalwa ayaziwa, kakhulu) banquma ukuzama ukuphila ezimele, ekukhathazekeni sabazali. Waya Tashkent ukudansa izindima phambili lapho Chelyabinsk Theatre, kodwa kusukela lapho-ke cishe ngokushesha singayiswa empini. Wabuyela ukuphila ezisetshenziswa umphakathi abe- washada wendodana esencane, kodwa futhi ngokushesha kakhulu baba lutho.
Iklabishi Igor wabuyela ifomu, bese udade Gal wamletha Petersburg Music Hall, yena-ke iminyaka eyisithupha, uye wahambela emhlabeni. Lapho eneminyaka engu-26, lapho aqala khona ukuthandana ne Muscovite Katya, ngawo baqala ukudansa ezinye umculo umdanso iqembu "Recital". Khona-ke u-Eugene Boldin (then- umyeni Pugacheva) esebathuma uhambo yonkana Greece.
Ngaleso sikhathi, Cole wayeseGibithe uthando nge actress kusuka ballet yabo Tatyana Kleptsevu (ku Klepa isidlaliso). Bahlala Greece iminyaka eminingi, futhi lapho befika e-USSR, kwakukhona kakade isiphithiphithi kabusha, izwe liye laba ihluke kakhulu. Baqasha ifulethi nge Tatiana e uxhaxha Chertanovo futhi waqala ukufuna umsebenzi.
I ezithakazelisa kunazo kwakuwukuthi njengamanje allegrova wangaba esigabeni nge Viktorom Saltykovym. Washiya, ukukhahla umnyango, waqala ngokushesha athole band. Yilokho Cole Klepa ithole ukusebenzela allegrova. Bese-baphotha wahlupheka. "INdlovukazi" ngokushesha ikhombe guy enhle, sexy nokuqothulwa kwezinhlanga okunonya. Ngokushesha Klepa ngafunda ukuthi Igor engathembekanga, kodwa hhayi komunye umuntu, kodwa nomnikazi wenkampani. Futhi wabe wahamba uwayosebenzela Kirkorov futhi Cole kuhanjiswe ku allegrova, ngaleso sikhathi ayehlala nayo indodakazi yakhe Lala Esitezi endaweni endlini enamakamelo amabili, phansi kubazali bakhe wesibili waphila.
Ngo-2012, ukuwa, amaphoyisa Petersburg ngesikhathi befuna imoto Igor Cole wathola amabili khilogremu insangu. Ukuze izidakamizwa ifa Cole Igor eneminyaka engu-52 ubudala ugwetshwe iminyaka engu-6. Ejwayele okunethezeka ngezithukuthuku zabanye, yahlatshwa wafuna bonke, ikakhulu Irina ukufakazela ukuthi kuwufanele okuthile. Kodwa wakhetha indlela esikhumbuza kuyingozi kakhulu lobugebengu lokwenza imali kalula ekusakazekeni yizidakamizwa, okwamholela ejele.
Kwaphela isikhathi eside futhi ezinye iziboshwa eziyisishiyagalolunye 9 sq eziqukethwe ekamelweni. m. Lo mdlali owayedlalela umlingisi uvele pancreatitis, emithanjeni varicose ukukhwehlela, bese yisifo senhliziyo, futhi ngokushesha wathumela esibhedlela, nalapho kuthiwa izinyanga ezintathu yayifa. Lokhu kuhlobene udadewabo Galya. izihlobo Igor wazama ukududuza Irina wacela usizo kuye, kodwa yena wakwenza kwacaca ukuthi kulesi simo kwakungeke ukugxambukela. Yilokho phezu.
Iklabishi Igor naphezu kwako konke, ubelokhu wama out phakathi kwabanye, emazwini Irene, ukukhalipha wakhe nokuphana, ingabe ngaleso sikhathi nokufumbathisa. Wayemthanda ngempela kuye, futhi yena kuye, kodwa isiphetho sabo ngandlela-thile ukusakaza. Abanaso ukuzwana, uvikelwe ukuqhosha, umona kanye nogqozi. Ayikho idrama - akukho ngesakhiwo. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi leli kwakuyithuba ambalwa ngaphezu kokuvamile, enhle futhi unothando kakhulu, okuyinto ngesikhathi esisodwa wayenomona ngabaningi.
Okubekiwe weRiphabhulikhi Komi: incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso
WuSuku Lokukhunjulwa amasosha-internationalists (Febhuwari 15) e-Russia